Ny torolàlana famoizana tavy any ambanin'ny tany izay nosakanana tamina Amazon - Fitness Fitness
Home » ebook » Ny torolàlana fatiantoka matavy ambany tany izay nosakanana tamina Amazon
Fantatrao ve fa ny fakana aspirinina zaza in-3 isan'andro dia afaka mampitombo ny fizotran'ny metabolika? Na amin'ny fitsakoana siligaoma nikôtinina iray monja, dia azonao atao ny manery ny vatanao handoro ny tavy mafy loha efa ntazoninao nandritra ny taona maro?
Marobe ireo teboka miharihary ao anaty torolàlana momba ny fahaverezan'ny tavy ambanin'ny tany, izay voarara any Amazon.
Ny fanahy mahery fo sasany dia nampiasa ny paikadin'ity torolàlana ambanin'ny tany ity mba hampidinana haingana ny 10, 20, na ny tavy 30 kilao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja.
Ny mpanoratra an'ity boky ity dia namorona ny bokiny rehefa avy nilatsaka 13 pounds ary nidina tavy amin'ny vatana tokana tao anatin'ny iray volana. Ho hitanao eo no ho eo ny antony maha-zava-dehibe azy io raha afaka mahazo tanana amin'ny kopian'ity boky ity ianao. Tsy asa tsotra ny fanarahana ity boky ity satria tena voarara hatramin'ny farany…
Noho ny natiora mampiady hevitra mampiahiahy an'ity programa ity dia tsy atolotra ao amin'ny Amazon intsony izy io ary tsy azonao atao ny maka kopia an'ity boky ity amin'ny fivarotana boky eo an-toerana. Nesorin'ny Facebook aza ny pejin'ny mpanoratra tsirairay! Ity fomba fiasa ambanin'ny tany ity dia novolavolain'i Matt Marshall izay mpampianatra manana fahazoan-dàlana ho an'ny tsirairay. Ao amin'ity torolàlana ity, i Matt dia nanambara fa ny ankamaroan'ny zavatra nianaranao momba ny fihenan-danja dia diso tanteraka.
Ity misy lisitry ny ao anatin'ity boky ity…
Manomboka ny antsitrika mandritra ny 44 ora - ahoana ny fahaverezan'ny 8.8 pounds ao anatin'ny 44 ora voalohany anao noho ny fanandramana tsy fahita
Fomba voajanahary ho an'ny fampitomboana ny lozisialy hormonina fivoarana amin'ny 512%.
Fomba fampiasana alikaola (raha misafidy misotro an'io ianao) hanafainganana ny famoizana tavy mandritra ny alina. * Fanamarihana: Ity fanondroana ity fotsiny dia mendrika ny vidin'ny fidirana ho an'ny olona maro. Raha efa nampandrenesina tokoa ianao fa mila mianiana alikaola mba hihavitsy dia toa adala izany. Ny zava-misy dia misy fihodinana iray mora azonao ampiasaina raha mbola mihinana toaka sy mahazo kibo sarotra sy mahia.
Maninona ny tetika fikotranana ara-batana sasany rovitra indrindra no mitsako siligaoma nikôtinina (tsy voatery atao izany, TSY mila manandrana an'ity paikady mampiahiahy ity ianao mba hanjary mahia).
Ahoana ny fomba hamakiana ilay "tsingerin'ny tsy fahasambarana" manjavozavo izay mitazona ny ankamaroan'ny olona tsy afa-po sy matavy.
Maninona no manatsara ny fizotran'ny metabolika ny mitsakotsako aspirinina alohan'ny fanatananao manaraka.
Ahoana no namaritan'ny mpanafika an'arivony tapitrisa “hack” tsy mahazatra iray izay ahafahanao misoroka ny lembalemba mampihena ny lanjany, ary ny fomba ahafahanao maka tahaka an'io teknika io maimaimpoana.
Azafady, azafady: ho hitanao isaky ny farany amin'ireo fanolorana fanontaniana apetraka ao amin'ity torolàlana ity na izany aza tsy mila mampiasa ny soso-kevitra mety hahatonga anao tsy hikorontana.
Fomba fampiasana "nofy maloto" hampihena ny lanjany haingana.
Araraoty ny Tontolo Pint: ny “hacker ice cream” tsy mahazatra an'i Matt izay mamela anao handany gilasy feno iray litatra… ary mifohaza mahia noho ny ampitso.
Matt Marshall's technique "mode-mode / binge-mode" teknika amin'ny fahazoana mahia ary FAMPANDROSOANA ny fizotran'ny metabolika isaky ny misoloky. (Eny, TSY MAINTSY misoloky ianao).
Io teboka io dia tsy azo hifanakalozan-kevitra. Mila mamitaka amin'ity drafi-very fatiantoka matavy ity ianao. Mety efa tonga saina tamin'ny andro fitabatabana ianao taloha, na izany aza ny tena tsotra dia ny andro fanolorana no mahatonga anao ho matavy ARY hanaraka ny fomba izay napetrak'i Matt eo amin'ny pejy faha-57.
Ahoana no ahafahan'ny sakafo "ratsy" toy ny spuds, licorice mena ary ny labiera aza manome anao abs-maso.
Maninona ny ankamaroan'ny fampihetseham-batana dia mampianatra ny vatanao fotsiny ny fomba fihazonana tavy… ary ny fomba "famitahana" ny vatanao ho lasa matavy mirehitra TSY MISY "fanazaran-tena mafy".
Miankina amin'ny fiainana: ny fomba faran'izay tsy mahazatra an'i Matt amin'ny "fivoahana" an'ity drafi-tsakafo ity izay miantoka anao tsy hamerina ny lanjany rehetra very anao… raha tsy takiana aminao ny hametraka drafitra fisakafoanana mandritra ny androm-piainanao.
Ny antony ara-dalàna amin'ny fihinanana proteinina be loatra - eny, na ny proteinina mahia aza - dia mahatonga azy io ho sarotra ho an'ny olona mazàna mba mahia.
Zava-misy: ny ankamaroan'ny mpanjifan'i Matt dia manangona vola MAMONJY noho ny sosokevitra ao amin'ny pejy 42. Na dia mila mandoa vola amin'ity torolàlana ity aza ianao anio, dia hitahiry vola any aoriana any.
Ity no zavatra….tsy afaka mividy an'io boky fahaverezam-bidy io ianao eh fa eto ihany a!
Ho fanampin'ny Boky Fahaverezan'ny tavy ambanin'ny tany dia hahazo miditra amin'ny adiresy mailaka anao manokana ianao Matt Marshall, fotoana ahazoana valisoa 10x “I Double-Dog Dare You” valisoa, ary koa boky 3 fanampiny nataon'i Matt Marshall ho maimaim-poana miaraka amin'ny ny kaomandinao mandritra ny fotoana voafetra ihany!
Hahazo ny 10-3-X Workout Program ianao, Ageless Abs, ary The 60 Second Hormone Fix.
Manontany tena ianao hoe ohatrinona ny vidin'ireto? Hahazo fidirana eo noho eo ity torolàlana ity ianao amin'ny fandoavam-bola tokana $ 19.95.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo teknika ao anaty boky ao anaty boky ao amin'ny Fat Fat any ambanin'ny tany, dia afaka mihalefaka ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Hahazo ireo boky bonus 3 noresahinay maimaimpoana ihany koa ianao!
Plus afaka 60 andro feno ianao hijerena ny zava-drehetra ary manapa-kevitra ianao fa tsy mety aminao ilay torolàlana na inona na inona antony, azonao atao ny mamerina ny volanao!
Disclaimer: Ity tranonkala sy bilaogy ity dia natao ho loharanom-baovao ihany, fa tsy azo raisina ho torohevitra ara-pitsaboana.
Ny fampahalalana omena eto dia natao hanampiana anao handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fahasalamanao. Tsy natao hisolo ny fitsaboana izay efa nopetran'ny dokoteranao.
Raha miahiahy ianao fa manana olana ara-pitsaboana, dia asaina mitady fanampiana sahaza ianao.